Fandraisana anjara amin’ny fifidianana :: Kivy amin’ny fahavitsian’ny kandidà ireo mpanara-maso • AoRaha
Fandraisana anjara amin’ny fifidianana Kivy amin’ny fahavitsian’ny kandidà ireo mpanara-maso
Mihena ny fahavononan’ireo mpanao politika te handray fahefana eny ifotony. Tsy nitsahatra nitontongana ny isan’ireo kandidà niatrika an’ireo fifidianana teto amintsika tao anatin’izay roapolo taona lasa izay.
Araka ny tatitra nataon’ny fiarahamonim-pirenena mivondrona ao anatin’ilay fikambanana misahana ny fanaraha-maso ny fifidianana andraisan’ny olompirenena andraikitra (Fanoa), tetsy Ambatonakanga, omaly, dia nihena hatramin’ny roapolo isan-jato eo ho eo ny isan’ireo kandidà niatrika ny fifidianana filoham-pirenena nanomboka tamin’ny taona 1993 hatramin’ny taona 2013.
“Nihena hatramin’ny folo isan-jato indray izany tamin’ny fifidianana filoha natao tamin’ny taona 2018”, araka ny tatitra ihany. Manaporofo ny tatitra nataon’ny Fanoa ny fahavitsian’ireo kandidà hiatrika ny fifidianana ben’ny tanàna hatao amin’ny 27 novambra ho avy izao. Ho an’ireo mpikambana ao anatin’ny Fanoa dia antony iray lehibe mety mahatonga an’io taha tsy mitsaha-midina io ny tsy fahatomombanana eo amin’ny fanomanana sy ny fikarakarana ny fifidianana.
Tsy matotra ara-poto-kevitra
Isan’izany ihany koa ny tsy fahampian’ny hoenti-manana ho an’ireo maniry ho kandidà amin’ny fifidianana. An-kilan’izay, efa naneho ny fahatsapany ny tsy fahamatorana eo amin’ny fanaovana politika eto amintsika ihany koa ny Fanoa. Na ara-poto-kevitra io na ara-ideolojia. “Misy fiantraikany goavana eo amin’ny fihenan’ny taham-pandraisana anjaran’ny mpifidy izany”, hoy hatrany ireo mpikambana eo anivon’ity vondrona fiarahamonim-pirenena mpanara-maso ny fifidianana ity.
Endrika iray manapotika ny fanaovana politika eto amintsika ny tsy fahampian’ny adihevitra matotra mikasika ny fomba hoentina hitantana ny firenena. Lasa adihevitra be eny amin’ny tambajotran-tserasera amin’izao fotoana izao mantsy, ohatra, ny endrika amam-bikan’ireo kandidà ka nahatonga ny Fanoa hametraka ahiahy amin’ny ho avin’ny fitantanana ny kaominina eto an-drenivohitra manokana.
Aza zatra manao boloky